Date My Pet » 7 Daty rehetra From New York City Mitohy
Raha any New York City miaraka amin'ny namany, antoka fa hitsitsy minitra vitsivitsy ny namaky ity pejy ity. No hijery tsara ilay resaka na dia ianao tokan-tena sy mitady ny mpiara-miasa ao an-tanàna; Niezaka avy anankiray amin'ireny noho ny vaovao fitiavana Azo antoka fa hanampy anao mba hamoronana fahatsapana tsara. Izany, eto dia fito daty avy any New York rehetra City Goes (vakio tokony handeha) amin'ny.
1. Mijery ny masoandro avy amin'ny Frying Pan
Ho an'ny tanora mpivady, ity toerana ity ny Hudson dia azo antoka fa iray amin'ireo toerana mafana indrindra mampiaraka ny tanàna amin'izao fotoana izao trano. The Pan, izay ankapobeny ny sunken lightship ny 1929, Natao nitsangana tamin'ny maty ary ankehitriny dia izany indrindra ny iray amin'ireo trano fisotroana Manitrika electrifying mandrakizay ianao dia hahita.
Ny fomba fijery ny filentehan'ny masoandro ny Renirano Hudson dia azo antoka fa scintillating sy manampy ny mikasika ny pitiavana ny ambiance ny bar.
2. Tantaram-pitiavana mandany tolakandro amin'ny Botanical Garden Brooklyn
Raha vao miditra ianao tanàn-dehibe io lonaka amin'ny Prospect Heights, dia hahatsapa ho toy ny hoe efa tonga lavitra avy amin'ny hustle sy bustle ao an-tanàna.
Botanical Garden ny Brooklyn manana ny ampy ara-boajanahary mba harena ianao sy ny namanao nirotsaka nandritra ny ora maro; ohatra, ny Indianina Flora Garden, ny Cranford Rose Garden, ny Shakespeare Garden sy kokoa. Na izany aza, izay no tianao indrindra momba ny toerana dia ny fampiononana amin'ny tolona ataonao mba hahazo amin'ny ankamaroan'ny faritra hafa ao an-tanàna.
3. A nankany amin'ny Flushing sakafo Malls
Ny sakafo Malls tany Flushing, New York City dia malaza noho ny fanompoana matsiro teny kantôney sy Mandarin vilia.
Ho tonga lafatra ho an'ny rehetra daty bonafide foodies. Ny olona tsirairay amin 'ny fahazarana ny famoahana sary ny sakafo rehetra izy ireo eo amin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny hahita hevitra tena mampiaraka izany enthralling.
4. Nandeha indray tao anatin'ny fotoana:
Mitady ny mandany fotoana be ny sasany miaraka amin'ny mpiara-miasa mandritra ny fahalavoana? Mikasa ny daty ao amin'ny trano manan-tantara tao amin'ny tanàna fahiny ny Richmond Town.
5. Ny fitsidihana ny Central Park
Central Park dia toerana lehibe ho any amin'ny mpiara-miasa mandritra ny vanin-taona mafana. Marina ny hoe tany New York fahavaratra City dia matetika taxingly mando; na izany aza, ny toetr'andro lasa mahafinaritra ny masoandro indray mandeha midina. Vokatr'izany, nandritra ny vanin-taona mafana, dia afaka mora foana ny drafitra datin'ny hariva teny an-kalamanjana.
Central Park, ny fialam-boly rehetra dia manana safidy, dia azo antoka fa toerana lehibe ho any amin'ny daty.
6. Manana ny mihomehy ny amin'ny Slipper Room
Mikasa ny hivoaka amin'ny namany amin'ny Talata alina? Ny misaintsaina ny mijanona amin'ny The Slipper Room. Isaky ny Talata, ny burlesque Seth dingana toerana ny Fampisehoana mampihomehy ilay Herzog. Aminy, Herzog matetika manana ny mahavariana sy mahatsikaiky Neny.
7. Ankafizo ny sarimihetsika ao amin'ny Bryant daty Park
Ho tonga lafatra ny sarimihetsika ho fantatr'ireo olona tia daty sy ny rehetra mpankafy ny kanto; fa, tsarovy ny sarimihetsika ao amin'ny Bryant daty Park dia tokony ho nomanina tamin'ny alatsinainy.
Isaky ny alatsinainy, masoandro, sarimihetsika an-kalamanjana no hita amin'ny fitantanana manokana io zaridaina-bahoaka. Misy Snacks, divay iray siny hoditra sy bodofotsy mba hitandrina ny roa aminareo Cozy ho ampy ny manana daty sarimihetsika tantaram-pitiavana.
Mety hitondra ny mpiara-miasa any amin'ny tantaram-pitiavana indrindra any New York toerana City, fa ny hanao ny daty iray nahomby, ianao ingredient mila ny lehibe ary ny fitia.
Ahoana izao hanalana Online Dating mikitoatoana
13 Winter Date Hevitra ho an'ny iray tsy hay hadinoina Experience